विश्वभर छरिएका तामाङहरुलाई एउटै मालामा गाँस्न अमेरिकामा सम्मेलन – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / अन्तर्वार्ता / विश्वभर छरिएका तामाङहरुलाई एउटै मालामा गाँस्न अमेरिकामा सम्मेलन
July 18, 2017 अन्तर्वार्ता, प्रवास Leaveacomment
आउँदो सेप्टेम्बर २ र ३ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा अमेरिका र क्यानडामा रहेका तामाङहरु एकै ठाउँमा जुट्ने तयारीमा छन्। उत्तर अमेरिकामा रहेको तामाङहरुको साझा संगठन बनाउने उद्देश्यले नर्थ अमेरिका तामाङ सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको छ। मुख्यतः नेपालको सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, काभे्रपलाञ्चोक, धादिङ, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लालाई उद्गम थलोका रुपमा लिइने तामाङहरु विश्वभर छरिएका छन्। आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन रहेको तामाङहरुलाई एउटै मालामा गाँस्ने अभियानका साथ सम्मेलन गर्न लागिएको सम्मेलन आयोजक समितिका सदस्य सचिव लक्यान लामाको भनाइ छ। अमेरिकामा झण्डै २ हजार र क्यानडामा झण्डै ५ सयको संख्यामा तामाङहरु रहेको बताइन्छ। नर्थ अमेरिका सम्मेलनलाई विश्वभर छरिएका तामाङहरुको साझा मञ्च निर्माणको अभियानका रुपमा लिइएको बताउने सदस्य सचिव लामासँग सम्मेलनको आवश्यकता, औचित्य, महत्व, योजना र संगठन निर्माण सम्बन्धमा गरिएको कुराकानी—
लामाजी, पहिला तपाईंको पृष्ठभूमि बताइदिनुहोस् न ?
नेपालमा मेरो पर्सा जिल्ला निर्मलबस्ती गाविस हालको सुवर्णपुर ठोरी गाउँपालिकाको ब्रम्हनगरमा घर रहेको छ । मेरो पुर्खा सिन्धुपाल्चोकबाट हुनुहुन्छ । मैले नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंबाट स्नातक सकेर त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेको हुँ । केही समय कानुन व्यवसायीका रुपमा समेत काम गरें भने बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिव भएरसमेत अनुभव लिने मौका पाएँ । समाज कल्याण परिषद्का सहायक निर्देशकको पनि जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव मसँग रहेको छ । नेपालमा रहँदा पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको हुँ, जनजातिको हितमा विभिन्न संस्थामा रहेर काम गरें भने सन् २००७ देखि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बस्दै तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाको सचिव र महासचिव पदमा रही समुदायका लागि काम गरिरहेको छु । आफ्नो बुद्धि, विवेक र क्षमताले सकेसम्म केही न केही गरिरहेको छु जस्तो लाग्दछ ।
उसो भए, यो सम्मेलन केका लागि ?
नर्थ अमेरिकाभर रहेका तामाङहरुलाई संगठित गर्दै नर्थ अमेरिकामा रहेका तामाङहरुको सहयोगी संस्था र नेपालमा रहेका तामाङ जातिको उत्थानमा केही ठोस काम गर्न सक्ने सशक्त संस्था बनाउने परिकल्पनास्वरुप यो सम्मेलन गर्न लागेका छौं । यसको म सदस्य सचिव र तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिकाका अध्यक्ष शान्तबाबु थोकर संयोजक रहनुभएको छ । २५ जनाको आयोजक समिति रहेको छ । सम्मेलन एउटा सशक्त अभियानकै रुपमा हामीले लिएका छौं । हाम्रो भाषा, संस्कृति, कलाको प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्दै नेपालमा हाम्रो जातिको उत्थानमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
यहाँ रहेको समुदायको उत्थानमा चाहिं के गर्ने सोच राख्नुभएको छ ?
खासगरी केही दशक यतालाई हेर्दा नेपालमा हाम्रो सम्पन्न जातिभित्र पर्दछ । हाम्रो समुदायका धेरै व्यक्तिहरु विश्वका विकसित मुलुकहरुमा पुग्नुभएको छ, विश्व श्रमबजारमा श्रम बेच्ने होस् या व्यवसाय गर्ने होस् अथवा नेपालमा रहँदा पनि व्यवसायमा संलग्न हुनेहरु बढिरहनुभएको छ । बिस्तारै यो समुदाय शिक्षाको हिसाबले समेत माथि आइरहेको छ, यो समुदाय मेहनती समुदायभित्र पर्दछ । तर, यसको अर्थ हाम्रो समुदाय पूरै माथि उठेको समुदायको हो भन्न खोजेको होइन, नेपालमा हाम्रो समुदायकै धेरै परिवार अहिले पनि पछि नै रहेको छ । उहाँहरुको उत्थानमा समेत हामीले केही गर्नु पर्छ भने यहाँ रहेका समुदायको व्यावसायिक विकासमा समेत सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ, त्यसमा समेत हामी मिलेर केही गर्न सक्छौं । खास कुरा समुदायकै लागि काम गर्ने हो, समुदायको संस्थागत विकासमा लाग्ने हो ।
सम्मेलनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?
सम्मेलनको तयारी द्रुत गतिमा भइरहेको छ । अमेरिकामा विभिन्न राज्यमा रहनुभएका तथा क्यानडामा रहनुभएका तामाङ दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुसँगको सम्पर्क बढिरहेको छ । हामी सबैसँग पुग्ने गरी तयारी अगाडि बढाएका छौं । मलाई लाग्छ, सबैको साथले हाम्रो अभियान सफल हुन्छ ।
तपाईंहरुकै समुदाय सम्बन्धित धेरै संस्थाहरु छन्, अनि के सबैलाई जान सजिलो छ ?
तामाङ सोसाइटी अफ अमेरिका पुरानो र प्रतिष्ठित संस्था हो, यसको इतिहास भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, यसको संरक्षण गर्नु प्रत्येक सदस्यको दायित्व पनि हो, त्यसैले हामीले सबै संस्थाहरुलाई ससम्मान प्रत्येक संगठनको इतिहास मिलाएर जानेछौं । सबैको अस्तित्वलाई समेत सम्मान गरेर साझा उद्देश्यसहितको साझा र सशक्त संगठन बनाउने छौं ।
के मिलाएर लैजान सजिलो छ ?
सजिलो या गाह्रोभन्दा पनि आवश्यकताको कुरा हो । सबैको उद्देश्य एउटै छ भने आवश्यकता पनि हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, हामीले हाम्रो समुदायका लागि गर्ने हो, यो समुदायको आवश्यकता पनि हो । अब हामी सबै मिलेर केही गर्न सक्दछौं । अब मिलेर एउटा बलियो संगठन बनाउनुपर्दछ ।
यो सम्मेलनपश्चात् साझा मञ्च बनेपछिको काम चाहिं के हुन्छ नि ?
तामाङहरुको नर्थ अमेरिकाभरिका यो केन्द्रीय संगठनको रुपमा रहन्छ । सँगसँगै हामीले विश्वभरि रहनुभएका तामाङ समुदायलाई समेत एकत्रित गर्ने पहल गर्न सक्छौं । खासगरी हामीले हाम्रो समुदायको कला, भाषा, संस्कृति, रहनसहनको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै यो समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक र सांस्कृतिक उत्थानमा भूमिका खेल्नेछौं ।
म सबै तामाङ दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई यो अभियानमा लाग्न आग्रह गर्दछु । अमेरिका र क्यानडामा रहनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो समुदायका अभियन्ताहरुलाई यसको पहलकदमी लिन म अनुरोध गर्दछु । हामी सबै मिलेर देश बाहिर रहेका र नेपालमा रहेका हाम्रो समुदायको हितमा काम गर्ने सशक्त समूह बनाउनेतर्फ लागौं, साथै हाम्रो समुदायभन्दा बाहिर रहनुहुने अन्य नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई समेत हामीलाई सकारात्मक सहयोग मिलिरहेको छ, आगामी दिनमा समेत यसैगरी हाम्रो समुदायलाई साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशासमेत राखेको छु ।
Previous म प्रधानमन्त्री बन्दिन
Next पुरुषोत्तम खड्गीको हातको नेवारी स्वाद न्यूयोर्कमा ब्राण्ड नेम